Ilay ampondra fetsy sy ilay ampondra tsotra - Takila Malagasy
Ilay ampondra fetsy sy ilay ampondra tsotra (Dadan'i Aina)
Nitsidika : 1319
Sokajy: Angano, Ankizy
Angano iray notsoahina ankolaka avy amin'ny anganon'i La Fontaine iray.
Indray andro hono nisy lehilahy iray nanana ampondra roa. Nanahirana azy mihitsy ireto ampondra ireto fa matetika miady. Rehefa entina miasa tany dia mifanitona sy mifanosika ka mivilavila izay tsy izy ny soritr'asa. Rehefa entina matsaka rano dia zara raha tapaky ny siny no tonga any antrano satria mifanenjika izy roalahy. Fantatr'ity lehilahy fa ny iray amin'izy ireo dia fetsy sy manjakazaka fa ny iray kosa mba tsotra sy mandefindefitra ihany.
Indray andro ary dia tapa-kevitra ralehilahy fa hitsapa ireto ampondrany. Ka hoy izy tamin'izy ireo.
- Andeha ianareo roalahy hiaraka amiko handeha an-tany lavitra. Dia an-tongotra mandreraka no hatao nefa misy iretsy kitapo feno entana roa iretsy, koa mila anareo roalahy aho hanampy ahy. Koa satria ianareo roalahy tsy mahay miara-mitondra entana, hoy ihany rangahy, dia samy mitondra kitapo iray avy ianareo.
Dia namaly hono ilay ampondra fetsy nanao hoe.
- Fa inona avy no ao anatin'ny kitapo? Ary mitovy ve ny lanjany?
Dia notohizan-drangahy ny fanazavany.
- Tsy mitovy ny ao anaty kitapo fa ny iray rovi-damba maivana ary ny iray sira vongany kilao maromaro.
Nitsatsaingoka ilay ampondra fetsy namaly hoe.
- Izaho izany no mitondra ilay kitapo feno rovi-damba. Lavitra ny lalana ka aleo entiko ny maivana. Sady nitsamboatra naka ilay kitapo feno lamba izy.
Tsy nahateny kosa ilay ampondra tsotra ka niondrika moramora naka ilay kitapo feno sira.
Teny an-dalana dia hita reraka ihany ilay ampondra tsotra ka niantso an'ity ampondra iray namany.
- Sao dia tokony hifampisolo kely indray isika rahalahy fa mavesatra anie ity entako ity e.
Saingy vao maika nitsambikimbikina sy nihomehy hono ilay ampondra fetsy nanao hoe:
- Hi-han! Hi-han! Mbola lavitra ny lalana ka raha mifampisolo isika dia ho reraka eo aho. Fa aleo samy mitondra ny entany ihany.
Dia nalahelo hono ilay ampondra tsotra nefa tsy hitany izay natao ka dia nizorany miadana ihany ny lalany.
Nony nisasaka ny lalana dia tonga teo amoron-drano lehibe iray ry zareo.
- Hiampita ity rano ity isika, hoy rangahy tompon'ampondra. Lalina anefa ny rano ka tsy maintsy hilomano isika. Mila mandeha tsirairay anefa mba tsy hanahirana raha sendra milentika. Ka iza no handeha voalohany?
Natahotra ilay ampondra fetsy ka tsy nety nandeha mialoha fa ity namany no natosiny hiditra mialoha ao anaty rano. Dia niroboka tokoa ary ity ampondra mavesatr'entana. Hatreny an-tenda ny rano ka tototry ny rano avokoa ny kitapo tao an-damosiny. Nony nandeha elaela anefa izy dia niha-maivana niha-maivana. Hay nitsonika tsikelikely ny sira tao anaty kitapony tratran'ny rano, ary levona manontolo mandrapaha-tongany tery am-pita ka maivamaivana tery izy.
Nony avy eo dia niditra indray ilay ampondra fetsy. Hatreny an-tenda koa ny rano ka difotry ny rano ny kitapo tao an-damosiny. Nony nandeha elaela anefa izy dia niha-navesatra hatrany ny entany. Hay nidiran'ny rano ilay kitapo feno lamba. Nony tonga teny am-pita dia vonton-drano tanteraka ny lamba tao anaty kitapo nentiny ka zary navesatra izay tsy izy.
Notohizana ny dia ka reraka mafy ity ampondra fetsy. Ilay ampondra tsotra kosa nipitipitika ery satria maivana dia maivana. Tsy sahy niantso fanampiana avy amin'ity ampondra namany hono ilay fetsy na dia efa tera-tsemboka fatratra aza.
Rehefa hitan'ilay rangahy tompony fa tsy ho vitan'ilay ampondra fetsy intsony ny lalana dia nasainy nijanona izy roalahy ka hoy izy.
- Hitanareo tsara izao fa ilàna fifanampiana sy firaisan-tsaina ny fiainana. Tsy hoe rehefa maivamaivana ianao dia hirehareha ka tsy hanampy izay mavesatra entana. Satria mety mbola ho tonga koa ny fotoana hampavesatra anao ka ireo olona izay nampianao ihany no hanampy anao indray.
Dia nifampizaran'izy roalahy hono ilay anjara enta-mavesatra nentin'ilay ampondra fetsy ka vetivety dia tonga tany amin'ny toerana nitodiany ry zareo.
Koa tsy misy manana ny ampy hono rankizy fa ny tsara dia ny mifanampy.